विश्व बजारमा नेपाली गाँ’जालाई किन रो’क लगाइयाे ? - krishipost.com
विश्व बजारमा नेपाली गाँ’जालाई किन रो’क लगाइयाे ?
विश्व बजारमा नेपाली गाँ’जाको निर्यात कहिलेदेखि सुरु भयो भन्न मुस्किन पर्छ। किनकि हिमालयमा आएर महादेवले प्रयोग गर्ने गाँ’जाका कयौं किम्ब दन्ती छन्। जब विश्वमा आर्थिक क्रा’न्ति सुरु भयो,त्यससँगै नेपालले पनि गाँ’जालाई आम्दानीको स्रोत बनाएको देखिन्छ। १९ औं शताब्दीमा नेपालमा आफ्नो व्यापार विश्वस्तरमा पुर्‍याएको र त्यसमा राम्रो उपलिब्धि पनि पाएको विभिन्न तत्कालीन समयमा लेखिएका विभिन्न दस्तावेजमा भेटिन्छन्।
२००८ सालबाट सरकारले गाँ’जा कम रोप्न आ’ह्वान गरेको भेटिन्छ। खाद्य तथा कृषि मन्त्रालयले एक विज्ञ’प्ति जारी गर्दै प्रत्येक जिल्लामा १० विगाह भन्दा बढी जमिनमा गाँ’जा खेती गर्न नदिन आह्वान गरेको थियो। खाद्य तथा कृषि मन्त्रालयले नेपालको गाँ’जा खेतीमा नियन्त्रण गर्ने निश्चय गरेको छ,त्यसअनुसार नेपालका प्रत्येक जिल्लाका बडाहाकिमलाई आदेश पठाइसकेको छ कि कुनै पनि जिल्लामा १० विगाह भन्दा बढी जग्गामा गाँ’जाको खेती गर्न नदिइयोस् विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यस्तै अर्को दस्तावेज हो फ्रान्सिस ह्यामिल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ‘एन अका’उन्ट अफ द कि’ङ्गन्डम अफ नेपाल’। सन् १८१९ मा बेलायतबाट प्रकाशित यो पुस्तकमा नेपालको ऐतिहासिक रूप देखिन्छ। यति मात्र होइन पुस्तकले त्यतिबेलाको नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक स्वरुपको पनि व्याख्या गर्छा। ह्या’मिल्टनले नेपालको गाँ’जा व्यापारको बारेमा पनि व्याख्या गरेका छन्। ‘नेपालमा गाँ’जा च’रेश धेरै प्रयोग हुने ला-गु’ प’दार्थ हुन्।
गाँ’जा नेपालमै उत्पादन गरेर व्यापार गरिन्छ, पुस्तकमा भनिएको छ.ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने गाँ’जा चरेशको बजार पनि यहाँ ठूलो छ। नेपालमा गाँ’जाको खपत बढ्नुको कारण हिप्पी थिए। अ-मान्यतया अरा’ जक देखिने उनीहरू लामो कपाल र अ’सामान्य अहिरनले चिनिन्थे। उनीहरू युरोप र अमेरिकाबाट नेपाल आउने गर्थे। हिप्पीहरू आफ्नो समाजको परम्परागत मूल्य स्वीकार गरेनन् र चित्रकला, संगीत लगायतका कलालाई जीवन बनाएर नेपाल लगायतमा देशमा आएर न’शामा ल’ठ्ठिन थाले। ती मध्ये धेरै ला’गू औ’षधका अम्मली हुन्थे।
नेपालको गाँ’जाले उनीहरूको तल तल मेट्थ्यो। पछि, नेपालमा गाँ’जा प्रतिबन्ध लाग्नुमा हिप्पीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रह्यो। युरोपियन र अमेरिकी देशहरूले आफ्ना देशका युवाहरू लागु औ’षधमा ल’ठ्ठिएर घुमिरहेको देख्न सकेन। र, विश्वमै लागु औ’षध वि’रुद्ध अभियान संचालन गरे। नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा बाधिएको कारण उनीहरूको अभियानलाई साथ दियो। फलस्वरुप नेपालमा गाँ’जा उत्पादनमाथि रोक लगाउन थालियो।
नेपाल राष्ट्रसंघको पनि सदस्य हो। यसैको ‘नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड’ले गाँ’जालाई लागु औ’षधकै दर्जामा राखेको छ। ‘सि’ङ्गल कन्भेन्सन अन ना’र्कोटिक ड्र’ग्स १९६’मा पनि समावेश मुलुक भएकाले नेपाललाई गाँ’जालाई रो-क लगाउनु नेपालको बाध्यता देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबाव कै कारण २०३३ सालमा लागु औ’षध नियन्त्रण ऐन ल्याएर नेपाल सरकारले गाँ’जा प्रतिबन्ध लगायो। ऐन आएपछि औषधिको रुपमा पनि गाँ’जा प्रयोग गर्न नहुने भनियो। त्यसपछि नेपालमा गाँ’जाले विदेशी मुद्रा तान्न छोड्यो।